10–faa’iidood oo waayeelka Soomaali laga barto! | HimiloNetwork
10–faa’iidood oo waayeelka Soomaali laga barto!
Posted by: Zakariya in Wararka August 18, 2015	0 452 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Waayeelladu waxay tusaale nool u yihiin da’yarta soo baxaysa. Da’yartu waxay xikmadda iyo garashadaba kasoo garoocdaan xiska waayeellada. Waayeelladu waa kuwa nagu toosiya dhabaha saxda ah maadaama ay nolosha in-badan nooga xog-ogaalsan yihiin. Marista ay mareen waayaha aynu hadda maraynaa, waxay awoodaan inay nagu hagaan nolol dhurowda.
Hayeeshe, waayeelladu ma helaan qiimihii ay in-badan nagu mudnaayeen. Looma tix-geliyo sida waayo nool oo billadaye u ah nolosheenna maanta. Waxaa muuqata in badi bulshadu ay iska indha-tiraan waxa waayeelkeennu ku fadhiyo. Maan-gal ahaan waa inaynu garwaaqsanaa waaya-joognimadooda iyo wax-galkooda! Tanina waa mid ku jirta gacmaheenna sidii aynu uga dheefsan lahayn wax-galka ay inoogu fadhiyaan.
Hadaba, Himilonetwork.com, wuxuu idin soo gudbinayaa 10—walxood oo aan waayeelladeenna ka baran karo khibradooda nololeed:
Qiimaha Qoyska: tani waa midda ugu muhiimsan oo aad waayeellada ka baran karto. Waqtiga aad badi la qaadato waxaad ka ogaataa qiimaha uu qoysku leeyahay. Waxaad ka barataa suubanaanta nolosha sida: xushmadda, wax-cafiska, dul-qaadka iyo niyad-samaanta “daacadnimada.”
Qorshe-nololeedka iyo ahmiyeynta: waa hubaal inaad u baahan tahay helidda dhabaha saxda ah ee aad ku gaari karto yoolka noloshaada. Waayeelladu waa isha aad ka heli karto waano dhaxal-gal ah iyo talooyin wax ku-ool ah. Guur, shaqo, qoys iyo wixii la halmaalaba, waxaad ku waajihi kartaa adiga oo tusaale dhab ah kasoo barta waayeellada. Waayo iyagaa kaaga horreeyey toobiyaha aad adigu hadda qaadayso. Marka waydiiso waayeellada inay kaa caawiyaan dajinta qorsheed ee kaabayaasha noloshaada. Waa hubanti inay hilinka toosan kugu ridi doonaan, insha Allah.
Inaadan qoomameyn: waxa ugu weyn ee waayeelladu da’yarta siiyaan waxaa weeye inaysan qoomamo ku noolaan. Waayo ma doonayaan inaad qoomamo ku hana-qaado. Taas rogaalkeeda, waxay ku siiyaan kalsooni iyo dhiirri-gelin kugu hagta inaad hankaada ku guuleysato. Si taas aad u fahamtana, waxay tusaale kaa siiyaan waayihii noloshooda. Markaas ayaad dhab ahaan u garowsataa in waqti tagay aanu tiigsi lahayn. Hayeeshe, wali aad haysatid waqti kugu filan oo aad kusoo kabsan karto.
Sida dadka loola dhaqmo: waayeelladu waa maaxda ugu weyn ee aad ka durduuran karto barashada hab-la-dhaqanka toosan iyo wada noolaanshaha dadka. Waayo waxay waayo badan lasoo joogeen dad kala duwan fiiro iyo fal ahaanba. Waa muhiim helidda talo iyo waano waayeel si aad nolosha kuu harsan ugu raaxeysato.
Ogolaansho: waayeelladu waa kuwa ugu horreeya ee qaabila marxaladda adag iyo raranka nolosha. Waxay og yihiin in noloshu sii soconayso dhib kasta oo jira. Waana sababta ay waqtigooda farxad ugu qaataan. Waxay hubaashii kugu kaalmeyn karaan inaad kororsato kartida aad kaga hor tagti karto waxa noloshaada ku yimaada. Taas oo gabagabadii ku barta in farxadda nolosha dhabta ah lagu gaaro qaabilista waddo kasta oo ay noloshu kugu soo waajahdo.
Waxaad ka barataa xigmad iyo waaya’aragnimo: badi dhalintu way ku dhacdaa inay waayeelka xigmad ka kororsadaan, hayeeshe, runtu waxay tahay inay inaga xigmad iyo waaya’aragsan yihiin. Waayeelku lamid ma ahan da’yarka kaas oo qaata go’aanno laab-la-kac ah. Doc kasta ayay wax ka eegaan kahor intaanay gaarin go’aan gunaanadan. Noolaanshaha gu’yaal badan, waayeelku wuxuu og yahay in waaya’aragnimadu macalin u tahay nolosha. Waxay kaa kaalmayn karaan marxaladaha ad-adag ee aad wajahayso. Waxay ku siin karaan tusaalayaal wax ku kordhiya noloshaada. Waxay ku bari karaan sida looga fogaado gafafka kugu soo noqnoqda. Waayo iyagaa gafaf hore kusoo waaya’aragoobay. Dhab ahaan, waayeelku waa u lama huraan da’yarkii raba inuu nolosha fahmo.
Sabirka iyo dul-qaadka: maadaama ay safarkoodii nolosha kusoo qaateen mahadhooyin kala duwan, waayeelku wuxuu ku bari karaa sida loola dhaqmo niyad-jabka iyo uur-ku-taallada. Markaad lumiso qof aad jeceshahay, waad murugootaa adiga oo aan u dul-qaadan Karin qaabilista adag ee nolosha. Waayeelku wuu lasoo dhaqmay marxaladahan oo kale. Wuxuu indhihiisa ku arkay qof uu jeclaa oo hortiisa ku naf-baxay. Wuuna kasoo gudbay. Inaad waayeellada la joogtaa, waxay kugu kaalmeysaa gudbista marxaladaha ad-adag ee nolosha.
Tusmo iyo Tusaale: waayeelku wuxuu aalaaba isku dayaa inu ku baro qiimaha tusmada iyo tusaalaha. Waxay in badan fal-ahaan kuu tusaan qiimaha ku-dayashada habboon.
Sheekooyin nool-nool: waayeelladu waxay lasoo tirsadeen shilal yaab badan intii ay kusoo jireen safarkooda nolosha. Waxaad ka baran kartaa waaya’aragnimo wax-garasho sheekooyinka ay weriyaan. Dhulal aadan tegin, dhaqamo aadan garanayn iyo dhibaatooyin lasoo maray ayaad ka faa’iidaa. Waxaad kale oo aad ka fahamtaa qiimaha ay dhursugistu u leedahay dhacdooyinka kugu soo baxa inta aad nolosha ku safrayso.
Cunna-karinta: ma jirto cunno ka nafaqo fiican cunnada ay ayeeyo kuu sameyso. Hadana, qofna iskuma luro inuu waayeelka ka barto qiimaha wax-karinta. Waxaad moodaa in howl-gab aan hilfo-laaban Karin waayeellada loo arkay. Waa inaynu waayeelladeena tusnaa in wali wax-tarkooda aan ka maarmin oo ay yihiin halka aan kasoo gaarnay wax-garashadeenna.
Previous: Maxaa Soomaaliya horumarkeeda ku gudban?!
Next: Noqoshada Muslim Hindiya ku nool waa halis hiirtaanyo leh!!